ပင်မစာမျက်နှာ United Kingdom ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ အင်္ဂလိပ်ဘောလုံးကစားသမားများ Fikayo Tomori ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
LB "အကောင်းဆုံးအမည်ပြောင်နှင့်အတူလူသိများနေတဲ့ဘောလုံး Genius ၏အပြည့်အဝပုံပြင်တင်ဆက်Fik"။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Fikayo Tomori ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့သူ့ရဲ့ကလေးဘဝအချိန်ကနေယနေ့အထိသင်သည်ထူးဆန်းသောဖြစ်ရပ်များတစ်ဦးအပြည့်အဝအကောင့်တတ်၏။
Fikayo Tomori ကလေးဘဝ Story- အဆိုပါခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနေ့စွဲရန်။ IG မှအကြွေး
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်သူ၏အစောပိုင်းဘဝ, မိသားစုနောက်ခံ, ပညာရေး / အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း buildup စောစောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအသက်, ကျော်ကြားမှုပုံပြင်မှလမ်း, etc ကျော်ကြားမှုပုံပြင်, ကြားဆက်ဆံရေး, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသက်, လူနေမှုပုံစံစတဲ့, မိသားစုဘဝမှထမြောက်ကပါဝင်ပတ်သက်
ဟုတ်ပါတယ်, လူတိုင်းအတွက်ခဲအမှားတွေလုပ်အဘယ်သူကိုအတွက်သူအပြည့်အဝပြန်လည်အဖြစ်သူ့ကိုရှုမြင် ဖရန့်လမ်းပတ် ရနှစ်သက်တော်မူ၏။ သို့သျောလညျးကိုသာအနည်းငယ်အတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်သော Fikayo Tomori ရဲ့အတ္ထုပ္ပတ္တိစဉ်းစားပါ။ အခုဆိုရင်နောက်ထပ် ado ခြင်းမရှိဘဲ, ရဲ့စတင်ဖို့ကြကုန်အံ့။
Fikayo Tomori ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - အစောပိုင်းဘဝနှင့်မိသားစုနောက်ခံ
ချွတ်စတင်ခြင်း, သူ့အပြည့်အဝအမည်များ Oluwafikayomi Oluwadamilola Fikayo Tomori ဖြစ်ကြသည်။ Tomori သူကိုမကြာခဏခေါ်တော်မူသည်အတိုင်း, Calgary, ကနေဒါမှာရှိတဲ့မွို့၌ဒီဇင်ဘာလ 19 ၏ 1997th နေ့၌ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ အောက်တွင်သူ့ကလေးတုန်းကနည်းနည်း Fik နှင့်သူ၏လှပသောအမိ၏ဓာတ်ပုံဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဦးချယ်လ်ဆီးပရိတ်သတ်အရ, ဓာတ်ပုံလည်းနိုင်ဂျီးရီးယားဖြစ်ပါတယ်။
Fikayo Tomori ရဲ့ Fik ဖြစ်ဖြစ်ပျက်တဲ့သူသူမ၏ကလေးငယ်ကိုသယ်ဆောင်။ IG မှအကြွေး
Fikayo Tomori ပထမဦးဆုံးကလေးနှင့် Osogbo ကနေသူတို့မိသားစုဇာစ်မြစ်ရှိသည်သောသူသည်မိမိချစ်စရာကောင်းတဲ့မိဘများက Mr နှင့် Mrs Oluwadamilola Tomori ဖို့သာသား, Osun ပြည်နယ်, အနောက်တောင်နိုင်ဂျီးရီးယားအဖြစ်မွေးဖွားခဲ့သည်။ မိမိဘွားမှီ, Tomori ရဲ့မိဘများပထမဦးဆုံးသူတို့သူ့ကိုခဲ့ဘယ်မှာကနေဒါမှရွေ့လျားမတိုင်မီဂို့, နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်ထေို။ နှစ်ဦးစလုံးမိဘများအရေးအသား၏ထိုအချိန်ကအဖြစ်၎င်းတို့၏နှောင်းပိုင်းတွင် 40 ရဲ့အတွက်ဖြစ်ပုံရသည်။
Fikayo Tomori သူ့မိဘနှင့်အတူပုံ။
မိသားစုနောက်ခံ: Fikayo Tomori တစ်ခုအထက်-လူတန်းစားမိသားစုနောက်ခံ, အဘယ်သူ၏ဥစ္စာစည်းစိမ်ဘောလုံးကွင်းမှ, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူ၏အဖွဲ့ဝင်အနောက်တောင်ပိုင်းနိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်ခိုင်မာသည့်နိုင်ငံရေးလွှမ်းမိုးမှုရှိသည်သူ၏တိုးချဲ့မိသားစုမှမဟုတ်ပဲချည်ထားခြင်းဖြစ်သည်တဦးတည်းအနေဖြင့်လာတာပါ။ မင်းသိလား?… အမည်များအားဖြင့် Tomori တိုးချဲ့အိမ်သူအိမ်သားတဦးတည်းအဖွဲ့ဝင်; Otunba (မစ္စစ်) ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း Titilayo Laoye-Tomori, မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်, BA, PGDE Osun, နိုင်ဂျီးရီးယားပြည်နယ်၏ယခင်လက်ထောက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်ခဲ့သည်။
Fikayo Tomori ရဲ့ချမ်းသာကြွယ် Aunt- Otunba ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း Titi Laoye Tomori ။ OliveBranch မှအကြွေး
နောက်ကျောကသူ့အစောပိုင်းဘဝမှ !. ကနေဒါခုနစ်နှစ်ဖြုန်းပြီးနောက် Fikayo Tomori ရဲ့မိဘပတ်ဝန်းကျင်အသစ်တစ်ခုယဉ်ကျေးမှုနှင့်အပြောင်းအလဲထိတွေ့ရန်လိုအပ်ကြောင်းခံစားရတယ်။ သူ့မိဘ Calgary ကနေလန်ဒန်ကိုသူတို့၏သား, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှင့်အတူပြောင်းရွှေ့။
Fikayo Tomori ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - ပညာရေးနှင့်အလုပ်အကိုင် Buildup
ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့တစ်နှစ် 2004 အတွက်နေစဉ်, Fikayo Tomori သူ့ကိုတပ်မက်အားကစားကာလအတွင်းမှာအပြိုင်အဆိုင်ဘောလုံးကစားရန်အခွင့်အလမ်းကိုကမ်းလှမ်းတဲ့ကျောင်းကိုတက်ရောက်ခဲ့သည်။ ဒါကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတက်ကောက်နေ၌သူ၏အကျိုးစီးပွားမှဦးဆောင်ခဲ့သည်။
2004 လည်းဝိုင်ချယ်လ်ဆီးအသင်းအင်္ဂလိပ်ဘောလုံးကြီးစိုးခြယ်လှယ်ဖို့ကျေးဇူးတင်စကားကိုမြင်လျှင်ထိုနှစ်တွင် အဆိုပါအထူးတစ်ဦးက အဘယ်သူသည် Didier ဒရော့ဘာနဲ့တူအာဖရိကန်မျက်နှာသာ။ မိမိအိမ်သူအိမ်သားအမျိုးမျိုးရှိသမျှအဖွဲ့ဝင်ကလပ်ထောက်ခံ Tomori ကိုယ်တော်တိုင်သူ့ကိုယ်ပိုင်အစီအစဉ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူကလန်ဒန်ကလပ်ရဲ့အကယ်ဒမီ၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာလိုသောအပေါ်သူ၏စိတ်ကိုထစေ၏။
သူ့အဘို့, ချဲလ်ဆီးအသင်းအကယ်ဒမီမှာစမ်းဘို့ scouted တဲ့များ၏ထိရောက်မှုအရှိဆုံးလမ်းတစ်ချယ်လ်ဆီးဘောလုံးကျောင်း join ဖို့ဖြစ်တယ်။ အဲဒီမှာနေစဉ်, ကင်းထောက်လူငယ်ကစားသမားကြားတွင်သူ့ကိုမရွေးသူတို့သည်ချယ်လ်ဆီးအသင်းဖှံ့ဖွိုးတိုးတစင်တာမှာစမ်းသပ်မှုတွေအဘို့ဖိတ်ခေါ်ခံခဲ့ရတယ်။
Fikayo Tomori ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - အစောပိုင်းအလုပ်ရှာဖွေရေးဘဝ
Fikayo Tomori ခုနစ်နှစ်အရွယ်ဆိအဖြစ်တစ်နှစ် 2001 အတွက်ချယ်လ်ဆီးအသင်းအကယ်ဒမီ Joined ။ ပူးပေါင်းအပေါ်သို့သူဟာကလပ်ရဲ့အောက်မှာ-8 အဆင့်အထိတပ်ဖြန့်ခဲ့သည်။ Tomori အောင်မြင်စွာသူ့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတစ်လျှောက်လုံးအလွန်အလျင်အမြန်ရာထူးတက်ရွေ့လျားချယ်လ်ဆီးရဲ့လူငယ် setup ကိုမှတဆင့်သူ၏လမ်းကြည့်။
မင်းသိလား?… ချယ်လ်ဆီးအကယ်ဒမီနဲ့သူ့ရဲ့အစောပိုင်းနှစ်တာကာလအတွင်း Fikayo Tomori သူချင်းအကယ်ဒမီကစားသမားနှင့်အတူဘွန်းမှစတင်ခဲ့ပြီး, Tammy အာဗြဟံသည် အဘယ်သူသည်အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ အောက်တွင်ချဲလ်ဆီးအသင်းအကယ်ဒမီနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ကလေးဘဝနှစ်တာကာလအတွင်းနှစ်ဦးစလုံးသူငယ်ချင်းဓာတ်ပုံဖြစ်ပါတယ်။
Fikayo Tomori အစောပိုင်းအလုပ်ရှာဖွေရေးဘဝက။ bpi နှင့် IG မှအကြွေး
ဘယ်လိုအချိန်ယင်ကောင်!။ သူတို့ရဲ့အင်္ကျီနံပါတ်များအတွက်ထင်ဟပ်သကဲ့သို့မိမိချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုဟာသူတို့ရဲ့ဆယ်ကျော်သက်နှစ်တိုးတက်။ နှစ်ဦးစလုံးစောစောပိုင်းအပေါ်, အကြီးတန်းအဖွဲ့ကသူတို့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၏အလွန်ထိပ်ဆုံးသို့ရောက်ရှိသူတို့ရဲ့အိပ်မက်တွေကိုကျင်းပခဲ့တယ်။ သူတို့ရဲ့ခင်မင်မှု၏နှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါတယ် တောင်ပေါ်က Mason ဆို နှင့် Declan ဆန်.
Fikayo Tomori ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - Fame ပုံပြင်မှလမ်း
ယခုနှစ် 2015 နှင့် 2016 Tomori ၏လူငယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်အလှညျ့အပွောငျးဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူယူအီးအက်ဖ်အေလူငယ်အဖွဲ့ချုပ်နှင့်အက်ဖ်အေလူငယ်ဖလားနှစ်ခုလုံးအတွက်အောင်မြင်မှု back ပြန်မှတ်တမ်းတင်အတွက်ချယ်လ်ဆီးလူငယ်အသင်းကိုကူညီပေးခဲ့သည်။ သူကြီးဘယ်လောက်ကောင်းကိုပြသနိုင်ရန်, Tomori နှစ်ဦးစလုံးဗိုလ်လုပွဲအတွက်သွင်းယူနှင့်ယခုနှစ် 2016 ချယ်လ်ဆီးအသင်းအကယ်ဒမီကကစားသမားအမည်ရှိ၏။
အောင်မြင်မှုဆက်လက်အဖြစ် Tomori ရဲ့လူငယ်အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ရှိမဆုံးခဲ့ပါဘူး။ 2017 မှာတော့သူဟာတောင်ကိုရီးယားမှာအရပျကိုလုယူသောဖြစ်ရပ်တစ်ခုမှာသူတို့ရဲ့သမိုင်းအတွင်းပထမဦးဆုံးအကြိမ်များအတွက်ဖီဖာ U20 ကမ္ဘာ့ဖလားအနိုင်ရရှိသူ၏အင်္ဂလန် U20 အဖွဲ့သည်ကူညီပေးခဲ့သည်။
Fame ပုံပြင်မှ Fikayo Tomori လမ်း
တနည်းကား, အခြားလူငယ်အောင်မြင်မှုနောက်နှစ် 2018 နောက်သို့လိုက်ကြ၏။ ဤအချိန်, သူ Toulon Tournament အနိုင်ရသည်သူ၏အင်္ဂလန် U21 ခြမ်းကူညီပေးခဲ့သည်။ ဤအရာအလုံးစုံအောင်မြင်မှုနေသော်လည်းသူတို့နေဆဲ Tomori ၏စိတျထဲမှာကြောက်ရွံ့ခဲ့ကြသည်။ အခုတော့ရဲ့သင်သည်အဘယ်ကြောင့်ပြောပြပါရစေ။
အဘယ်ကြောင့်ကြောက်လန့် ?: ချဲလ်ဆီးအသင်းကသူ့ကိုအကယ်ဒမီဘွဲ့ရများအတွက်ချေးငွေ-စနစ်၏ဝါသနာကြောင်းကိုကောင်းစွာမှတ်တမ်းတင်ဒါဟာဖြစ်ရဲ့နဲ့ပထမဦးဆုံးအသင်းအတွက်သူတို့ကိုကစားရန်တွန့်ဆုတ်နေကြသည်။ ဒါကသူတို့ကပထမဦးဆုံးအသင်းမှည့်သောစဉ်းစားနေကြသည်ယခုအချိန်တွင်အားလုံးအကယ်ဒမီကြယ်အိမ်မှာရှိနေတဲ့စိတ်ကိုကွောကျရှံ့ဘာလို့အကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဘွဲ့ရအကယ်ဒမီကစားသမားအဖြစ်, Tomori ရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေသူ့ကိုအမဲမြို့သို့ရောက်လေ၏။ သူကအတူတူသူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေတစ် Tammy အာဗြဟံနှင့်အလုံအလောက်ဂိမ်းအချိန်မရကြဘူး။ သူတို့အတွေ့အကြုံကိုရရှိနိုင်အောင်သူတို့သည်အခြားကလပ်အသင်းမှပယ်တင်ပို့ခဲ့ကြသည်။ Tomori သည်သူ၏အကယ်ဒမီနှစ်အတွင်းအကောင်းဆုံးများထဲမှဖြစ်ခြင်းသော်လည်းချယ်လ်ဆီးအသင်းချေးငွေစစ်တပ်၏အသစ်တစ်ခုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်။
Fikayo Tomori ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - Fame ပုံပြင်မှထလော့
ဂိမ်းအချိန်နှင့်အတွေ့အကြုံအရတစ်ဦးကြိုးပမ်းမှုများတွင် Tomori ချေးငွေအားဖြင့်အပေါ်ဝယ်ယူတယ် ဖရန့်လမ်းပတ် ထို့နောက်မှာဒါဘီကောင်တီနည်းပြအဖြစ်သူ၏ချိန်းပြီးနောက်ချယ်လ်ဆီးချေးငွေဗိုလ်ခြေ RAID ဖို့မစ်ရှင်အပေါ်သူကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ လမ်းပတ်ယုံကြည်မှုအပေါ်ချေးငွေအခြေစိုက်စခန်းအပေါ် Tomori ရရှိခဲ့သည်။
Fikayo Tomori နောက်ဆုံးတွင်ဒါဘီကောင်တီပထမဦးဆုံးအသင်းသို့အောင်မြင်မှုများရရှိခဲ့သည်။ သူအဖြစ်မကြာမီသူကိုသူတို့အားချန်ပီယံရှစ်၏ကစား-off ဖိုင်နယ်ရောက်ရန်ကူညီပေးနေ, မာန Park မှာရောက်ရှိလာခဲ့အဖြစ် running မြေပြင်ကိုနှိပ်ပါ။
မင်းသိလား?… Tomori ရဲ့ထူးချွန်ရာသီအသိအမှတ်ပြုခြင်းမခံရမသွားခဲ့ပါဘူး။ သူဟာအမည်ရှိ၏ တစ်နှစ်တာ၏ဒါဘီရဲ့ ​​Player ကို ကလပ်နှင့်အတူသူ့ရဲ့ပထမဆုံးရာသီအဆုံးမှာ။ ဒါဟာသူ့ကိုဒီဆုချီးမြှင့်အနိုင်ရသည့်ပထမဆုံးချေးငွေကစားသမားဖြစ်လာ၏ကလပ်စံချိန်တင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ သူဟာချယ်လ်ဆီးအသင်းဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများ၏လမ်းညွှန်မှုအောက်တွင်ဒီအောင်မြင်, ဖရန့်လမ်းပတ်.
သူတို့ရဲ့ဒါဘီ Voyages ကာလအတွင်းဖရန့်လမ်းပတ်နှင့်အတူ Fikayo Tomori ။ IG မှအကြွေး
အကြားဆက်ဆံရေး လမ်းပတ် နှင့် Tomori ရှိရပ်တန့်ခဲ့ပါဘူး။ ကစားသမားများနှင့်မန်နေဂျာနှစ်ဦးစလုံးဒါဘီမှာသူတို့ရဲ့အချိန်ပြီးနောက်ချယ်လ်ဆီးမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့။ လမ်းပတ်ကိုအစားထိုးပြီးနောက်ဤအဖြစ်ပျက် Sarri အဆိုပါချဲလ်ဆီးအလုပ်အကိုင်အဘို့။
အဆိုပါ 2019 / 2020 ရာသီကနေတရားစီရငျကလမ်းပတ်သည်အလွန်မြင့်မားသောကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျ. Tomori ရရှိထားသူကြောင်းရှင်းပါတယ်။ Tomori လန်ဒန်ကလပ်များအတွက်ပန်ကာရဲ့အများနှင့်မန်နေဂျာရဲ့ဦးစားပေးစင်တာကျောရွေးချယ်မှုဖြစ်လာခင်ကအချိန်တစ်ခုသာကိစ္စပါပဲ။ မိမိအကြိုးပဲ့အိပ်မက်ယခုပွညျ့စုံမညျဟုသတ်မှတ်ထားပြီး ကြွင်းသောအရာ, သူတို့ပြောသကဲ့သို့ယခုသမိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
Fikayo Tomori ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - relationship ဘဝ
ကျော်ကြားမှုဟာသူ့မြင့်တက်မှုနှင့်အတူကအများဆုံးချယ်လ်ဆီးပရိတ်သတ်တွေ Fikayo Tomori ရဲ့ရည်းစားဖြစ်စေခြင်းငှါ, ဘယ်သူကိုမေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များရာ၌ခန့်ထားပြီမယ်လို့အချို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့! အဘယ်သူမျှမကစားသူ၏စတိုင်နှင့်အတူ coupled သည်သူ၏မှောင်မိုက်-ချောမောရူပသူ့ကိုမင်းသမီးတစ်ဦး Darling စပျစ်နွယ်ပင်ဖြစ်စေခြင်းငှါမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုငြင်းပယ်ရှိသေး၏။
ချယ်လ်ဆီးပရိတ်သတ်တွေမကြာသေးမီကဟုမေးကြပါပြီ ... ဘယ်သူ Fikayo Tomori ရဲ့ Girlfriend ဖြစ်ပါတယ် ?. IG မှအကြွေး
Tomori လူမှုမီဒီယာလက်ကိုင်ပေါ်ရရှိနိုင်သတင်းအချက်အလက်များအပေါ်အခြေခံပြီးပြုလုပ်သူ (စာအရေးအသား၏ထိုအချိန်ကကဲ့သို့) သူ့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုအာရုံစိုက်ဖို့ပိုမိုနှစ်သက်ခဲ့ပါသည်ပေါ်လာသည်။ ဤအချက်ကိုခက်ခဲကျွန်တော်တို့ကိုသူ၏ဆကျဆံရေးဘဝသို့မဟုတ်ချိန်းတွေ့သမိုင်းနှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်အချက်အလက်ကိုစုဆောင်းဖို့စေသည်။
တစျဖနျ, Fikayo Tomori ချဲလ်ဆီးပရိတ်သတ်တွေနဲ့မန်နေဂျာအလွန်အထင်ကြီးလို့မရဘူးသူအလာမည့်လူငယ်, ကလပ်ချေးငွေကစားသမားတစ်ဦးတပ်ရင်းရှိပါတယ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲကမှကို un-အပြစ်ကိုလွှတ်နိုင်သိတယ်။ ဒါကွောငျ့က Tomori ရည်းစားရှိအံ့သောငှါလည်းဖြစ်နိုင်ပေမယ့်သူမ၏အများပြည်သူနှင့်အတူသူ၏ဆကျဆံရေးအောင်ဖို့ငြင်းဆန်, အနည်းဆုံးယခုများအတွက်.
Fikayo Tomori ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝ
ကွာသည်သူ၏ဘောလုံးကစားသမားဘထံမှ Fikayo Tomori ကိုယ်ပိုင်ဘဝကသိရန်ရယူခြင်းသူ၏ပင်ကိုစရိုက်တစ်ခုပိုကောင်းနှင့်ပြည့်စုံအမြင်အရကူညီလိမ့်မယ်။
ချွတ်စတင်ကာ Fikayo Tomori တစ်ဦးတည်းနှင့်ဝေးအသက်တာ၏စစ်မှန်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုများအတွက်ရှာဖွေရေးအတွက်အရာအားလုံးကနေအချိန်ဖြုန်းဖို့ကြိုးစားပါတယ်ကွယ်ပျောက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလှုပ်ရှားမှုများအနေဖြင့်သူသည်တစ်စုံတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ Tomori ကွန်ကရစ်လုပ်ရပ်တွေကိုသူကပြဇာတ်များ၏အစေးပေါ်တက်ကိုထည့်လေ့မရှိသည့်တဦးတည်းထဲသို့သူ၏အကြံအစည်အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးနိုင်သည်။
Fikayo Tomori ကိုယ်ပိုင်ဘဝကအချက်အလက်နဲ့။ IG မှအကြွေး
အမြင်တစ်အတွေးအခေါ် point ကနေ non-အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းယခုအချိန်တွင်စဉ်အတွင်း Tomori တတ်နိုင်သမျှကြောင့်တွေ့ကြုံခံစားရန်လေလံအတွက်ကမ္ဘာနှင့်အဆက်အသွယ်ရရနှစ်သက်တော်မူ၏။
Fikayo Tomori ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - မိသားစုဘဝ
ဒါကြောင့်မိသားစုမှကြွလာသောအခါ, Fikayo Tomori ဆက်ကပ်အပ်နှံနှင့်သူ၏အဖေ, မိခင်နှင့်အလွန်တော်တော်ကလေးညီမပျော်ရွှင်စေရန် humanly ဖြစ်နိုင်သောနီးပါးဘာမှလုပ်ဖို့ဆန္ဒရှိသည်။ မိသားစုကိုအောက်တွင်ရှုလေ့လာအဖြစ်သူ၏ချက်ချင်းလန်ဒန်မြို့ရှိတစ်ဦးအလွန်ပျော်ရွှင်ဘဝသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်၏အောင်မြင်မှုကိုမှကျေးဇူးတင်စကားနေထိုင်ပါတယ်။
Tomori သည်သူ၏ချက်ချင်းမိသားစုနှင့်အတူနေပါသည်။ IG မှအကြွေး
အားလုံးမိသားစုဝင်တွေဟာသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးအတန်းအစားနိုင်ဂျီးရီးယားအမြစ်များဂုဏ်ယူဖြစ်ကြပြီးပြုလုပ်ဖော်ပြရန်ရှက်ဘယ်တော့မှဖြစ်ကြသည်။ အဖေ, မိခင်နှင့်ကလေးနှမအားလုံးနှစ်ဦးစလုံး Fik နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံအသင်းများအတွက်ကစားချင်တယ်အဖြစ်ဤသည်ထင်ရှားဖြစ်၏။ Fikayo Tomori ရဲ့မိခင်နှင့်ကလေးအစ်မတစ်ဦးအနိမ့် key ကိုဘဝအသက်ရှင်စဉ်အခါ, သူ့အဖေကသူ့သားရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတိုးတက်မှုတွင်တိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်ရရှိသွားတဲ့။
မိမိသားတော်စောင့်ကြည့်ဖို့စိတ်လှုပ်ရှား: မင်းသိလား?… ဒါဘီကောင်တီမှာနေစဉ်, Tomori သူ့အဖွဲ့ပြစ်ဒဏ်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွါးခဲ့မှတဆင့် Carabao ဖလားကနေသိသိသာသာဖျက်သိမ်းရေးအတွက်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အနိုင်ရကူညီပေးခဲ့သည်။ ဘယ်သူမှစိတ်လှုပ်ရှားမှုအတွက်တက်ဆင်းသူ့သားရဲ့ဧရာမအောင်ပွဲမှကျေးဇူးတင်စကားခုန်ချသောမိမိအဖေထက်ပိုပြီးဘုန်းကြီးဖြစ်ခဲ့သည်။ အောက်ကဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုပါ။
Fikayo Tomori ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - လူနေမှုပုံစံ
စာအရေးအသား၏ထိုအချိန်ကအဖြစ် Tomori တိုးမြှင့်ဖို့ရည်ရွယ်သော7သန်းပေါင်တစ်စျေးကွက်တန်ဖိုးရှိသည်။ ဒီအများကြီးမဆိုလမ်းထဲမှာအောင်မြင်ကျော်ကြားပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေလူနေမှုပုံစံစတဲ့, ထူးခြားဆန်းပြားကားများ, အိမ်တော်နှင့်မိုးသည်းထန်စွာ swagger လက်တဆုပ်စာအားဖြင့်အလွယ်တကူသိသာကြောင်းတဦးတည်းသို့ဘာသာပြန်ရန်မပါဘူးတန်ဖိုးထားရတဲ့။
Fikayo Tomori လူနေမှုပုံစံစတဲ့အချက်အလက်
Tomori များအတွက်ပုံမှန်ဘဝအသက်ရှင်ဖို့ငွေအလုံအလောက်အမြဲရှိပါတယ်။ တစျဖနျ, သငျသညျသိစေရန်သူ၏ဘဏ္ဍာရေးအောင်မြင်မှုတိုက်ရိုက်သူတစ်ဦးကြွယ်ဝသောမိသားစုမှလာမယ့်ဘောလုံးသမားတရားအဖြစ်သူ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမှချည်ထားသောချည်ထားခြင်းမရှိပါ။
Fikayo Tomori ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - မရေမတွက်အချက်အလက်
1997, တစ်နှစ်တာ Tomori မွေးဖွားခဲ့သည်နေဆဲသမိုင်းမှာအများဆုံးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ပုံပြင်များထဲကတစ်ခုဖြစ်နေဆဲဖြစ်သော "တိုက်တန်းနစ်" အမည်ရအဆိုပါဒရာမာ / သဘာဝဘေးရုပ်ရှင်လွှတ်ပေးရန် featured ။
အဲဒီနှစ် 1997 ကိုလည်းလောက "အဖြစ်ရည်ညွှန်းတော်မူသောလူရဲ့မင်းသမီးလေး၏အသေခံမှတ်သားမင်းဆက် Di"။ နှောင်းပိုင်းတွင်မင်းသမီးဒိုင်ယာနာ paparazzi အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ခံနေစဉ်ကားတစ်စီးပျက်ကျ, ပဲရစ်ဦးသေဆုံးခဲ့သည်ကိုအောက်တွင်ပုံ။
မင်းသမီးဒိုင်ယာနာယခုနှစ် 1997 သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ နေ့စဉ် Express ကိုမှအကြွေး
ဂုဏ်ထူးနှင့်ဆုပေးပွဲ: Tomori သူအရေးအသား၏ထိုအချိန်ကအဖြစ်ကိုအောက်တွင်ရှုလေ့လာအဖြစ်အများအပြားဆုဖလားများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီဂုဏ်ထူးတက်ယူပြီးများအတွက်ကစားနီးပါးတိုင်းအသင်းအတွက်အစွမ်းပြကြသူနှင့်အတူသူတို့အားလူငယ်ဘောလုံးသမားများတစ်ခုဖြစ်သည်။
အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ Fikayo Tomori မှတ်တမ်းနှင့်ဂုဏ်ထူး။ ခရက်ဒစ်မှ TheSun
သမ္မာကျမ်းအမှန်တရားနေစစ်ဆေးခြင်း: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Fikayo Tomori ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ဖတ်နေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တွင် LifeBogger, ကျနော်တို့တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တရားမျှတမှုများအတွက်ကြိုးစားကြသည်။ သင်မှန်မကြည့်ဘူးသောအရာတစ်ခုခုကိုရှာဖွေပါလျှင်အောက်တွင်မှတ်ချက်ခွငျးအားဖွငျ့အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူဝေမျှပါ။ ကျနော်တို့ကအမြဲသင့်ရဲ့အိုင်ဒီယာကိုတန်ဖိုးထားလေးစားပါလိမ့်မယ်။
Callum Wilson ကကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ယေရှဲ Lingard ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Dominic Calvert-Lewin ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ဂျိမ်းစ်ကထုတ်တဲ့ Maddison ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်